Yakakwira mhando Solar mugwagwa mhete SD-RS-SG3 vagadziri uye vanotengesa | Wistron
Solar mugwagwa mhete SD-RS-SG3
Magetsi: Solar Panel (monocrystalline 5V / 90mA) (1.2V / 1300mAh)
Bhatiri: zvinoreva bhatiri 3.2V / 1000mah (1.2V / 1500mAh)
Akatungamirira mavara: Yero, Chena, Tsvuku, Girinhi, Bhuruu
Uchapupu hwemvura: IP68
Solar Road Stud zvakare inoziva sematsi katsi, inogona kubatsira kudzikisa tsaona panzimbo njanji kuyambuka, mharadzano uye kupa hutungamiriri uye yambiro yenjodzi kune vatyairi vari murima nemamiriro ekunze akaipa. Iyo rezuva system yemagetsi emagetsi emagetsi emagetsi anokodzera kudzikisira kukanganisa kwezvakatipoteredza uye kuchengetedza mari. Iine anopfuura makore gumi neshanu eruzivo rwefekitori, inotungamirwa mumigwagwa inoratidzira inogadzirwa nekambani yedu ine mutengo wemakwikwi uye inopa yakawanda sarudzo kune yepasirese traffic traffic musika uye mushandi akavimbika pasirese.
Hwaro hweiyi mwenje yemagetsi ezuva inoumbwa nealuminium yakakandwa, uye pamusoro pacho chakagadzirwa nepurasitiki yekumwaya tekinoroji.
Iyo goko inogadzirwa neyakagadziriswa PC zvinhu, iyo ine yakanakisa kukanganisa kusagadzikana uye kupisa kupisa.
Kuisa chinopfuura matani makumi mana, inogona kushandiswa pakati pemugwagwa.
Nzira dzemwenje dzemwenje dzave kugamuchirwa zvakawandisa sezvakakosha mukudzora kuyerera kwetraffic muhuwandu hwakawanda hwekushandisa. Mukuita, masystem akadaro anoshanda mushe pamusoro pemugwagwa uye anoshandisa akati wandei anozivikanwa uye akagamuchirwa mavara, aine mwenje mune zvakatarisana kuita kuti meseji kune mutyairi ive yakajeka uye isina univocal nekudaro ichivandudza kubuda kwemugwagwa uku ichiwedzera kuchengetedza zvinhu.
Chigadzirwa zita Wistron SD-RS-SG3 solar mugwagwa stud
Zvinhu zvemuviri Heavy basa kukanda Aluminium
Magetsi Solar Panel (monocrystalline 5V / 90mA) (1.2V / 1300mAh)
Bhatiri Lithium bhatiri 3.2V / 1000mah (1.2V / 1500mAh）)
Akatungamirira 3pcs / kudivi φ10mm kupenya kwakanyanya LED
Akatungamirira mavara Yero, Chena, Tsvuku, Girinhi, Bhuruu
Flashing modhi kupenya kana kugara
Uchapupu hwemvura IP68
Hupenyu hwakareba Makore matatu e lithiamu bhatiri
Kuramba > 20tons (kunofambira mberi)
Kushanda modhi Kubwaira kana Kugara (kuchaja masikati uye kushanda otomatiki husiku)
Kushanda maawa Maawa mazana maviri emamirioni anopenya, 100hrs emamodhi akatsiga
Rutivi rwekuona > 800m
Saizi Φ120mm * 50mm
Pasuru 1pcs / bhokisi; 32pcs / Ctn; Kurema: 26.1Kg; Saizi yekatoni: 54 * 28 * 26cm
Kushanda Musimboti weSolar Road Stud Chiedza
Pakati pezuva, mapaneru ezuva anopinza mwenje wezuva uye oshandura simba rezuva kuita simba remagetsi, iro rinochengetwa mumidziyo yekuchengetera magetsi (mabhatiri kana ma capacitor). Husiku, simba remagetsi riri mumidziyo yekuchengetera magetsi rinoshandurwa roga rive simba remwenje (rinodzorwa nemagetsi switch) uye rinoburitswa nemaLED. Chiedza chakajeka chinoratidzira mugwagwa uye chinoita kuti mutyairi aone. Solar road studs inotanga kungoerekana yapenya kana husiku hwava kudoka kana nekutanga kwemamiriro ekunze asina kunaka .Magetsi anopenya anopenya anoshanda zvakanyanya pakuita kuti vatyairi vatariswe kare kupfuura zvakajairika nzira dzemumigwagwa.
Kuisirwa Nzira Yeakadzikwa Solar Road Stud
1. Chenjerera mucherechedzo chinhambwe pakati pekuiswa kwemagetsi emagetsi emagetsi ezuva. Kuti udzivise zvakashata pasi, shandisa chishandiso chakakodzera seCore Drill.Drill Φ120mm uye kudzika kuchave 50mm.
2. Bvisa marara ose kubva pagomba rekuisa.
3. Dururira epoxy mumakomba pamurairidzo wemugadziri.
4. Chokwadi chekuti gomba rekumisikidza rakatwasuka.Ichokwadi kuti gomba rekumisikidza rakakura zvakakwana kuti ribvumidze epoxy kukomberedza girazi rinotungamirwa nemugwagwa wezuva.
5.Gadziridza pamusoro pemwenje yezuva renzira yemugwagwa kune yaunoda kuona kona. Tarisa kuti epoxy yakanyatso namatira kune iyo gomba rekumisikidza uye rezuva rekumaka shaft.
6. Mushure mekuporesa iyo LED rezuva mugwagwa stud kwema6-8 maawa, bvisa kuisirwa kwekuzviparadzanisa nzvimbo.
Iyo nzvimbo yakakurudzirwa pakati pega roga renzira dzemugwagwa inzira dzinotevera:
Highways uye Expressways
7 - 8 mayadhi (5 - 6 metres)
Kupinda Njodzi uye Kubuda
4 - 5 mayadhi (2 - 3 metres)
Kuwana kana kubuda nzira dzezvipatara, nzvimbo dzekupaka, nezvimwewo.
0.5 - 3 mayadhi (0.5 - 2 metres)
Kupatsanurana pakati peimwe neimwe yezviratidziro zvezuva zvakare zvinoenderana neyako chaiyo yekushandisa zvinodiwa, zvirevo zviri pamusoro ndezvekureva chete.
Pashure: Solar mugwagwa mhete SD-RS-SP1
Zvadaro: Solar mugwagwa mhete SD-RS-SA5
Isina waya Solar Road Stud
Solar mugwagwa mhete SD-RS-SP2
Pe Traffic Cone Chinhu
Solar mugwagwa mhete SD-RS-SG2
Aluminium Mugwagwa SD-RS-A3 (Aluminium Katsi Maziso \_ ...
Solar mugwagwa mhete SD-RS-SA3